🥇 ▷ Waa maxay farqiga u dhexeeya iyaga Apple Pay, Apple Cash iyo Apple Card ✅
Waa maxay farqiga u dhexeeya iyaga Apple Pay, Apple Cash iyo Apple Card
Iyada oo la imanayo cutubyada ugu horreeya ee kaarka deynta Apple ee adeegsadayaasha, waxaa jira dad badan oo wax weydiiya maxay ku kala duwan yihiin Apple Pay, Apple Cash iyo Apple Card. Dhamaan adeegyadan waa kuwa cusub waxayna wadaagaan waxyaabo badan oo isku mid ah, waana sababtaas sababta ay muhiim ugu tahay in sifiican loo ogaado si loo ogaado sida loo kala sooco.
Apple Pay, waxaay ku wada bilaabeen adiga
Markii la bilaabay bilaawgii sanadkii 2014-ka iPhone iyo Apple Watch ee 2015, shirkaddu waxay billowday aaladdii lacag-bixinnada mobilada. Magaca magaca Apple Pay, waa nidaam hadafkiisu yahay inuu beddelo adeegsiga kaararka si loogu bixiyo iibsashada iyo safarada gaadiidka dadweynaha. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu uruuriyo dhibco dukaamaysiga iyo in lagu gaaro munaasabadaha cayaaraha qaarkood.
Debit-ka iyo kaararka deynta waa iney ahaadaan kuwo bangi ku jira Apple Pay. Si loogu daro iyaga, waa inaad ku sii socotaa iPhone to Settings> Wallet iyo Apple Pay ama si fudud aad u furto barnaamijka Wallet oo aad raacdo tillaabooyinka. Markaan dhamayno, waxaan bixin karnaa lacag jidheed oo leh iPhone iyo Apple Watch. Sidoo kale dukaamada khadka tooska ah ee loo maro iPhone, iPad ama Mac.
Ka hor intaadan bixin lacagta, waa inaad ku xaqiijiso iyada oo loo marayo “ID ID” ama “ID ID”. Lacag bixinnada jir ahaaneed, waxay ku filnaan doontaa in la keeno iPhone ama Apple Watch meesha POS ee ganacsiga, taasi waa inay noqotaa xiriir la’aan. Barnaamijka Wallet-ka ee iPhone-ka sidoo kale wuxuu u dhaqmaa sidii koox koox ah oo ah Apple Pay sida Apple Cash iyo Apple Card Sidaas darteed, waa lama huraan in Apple Pay la hawlgeliyo si loo isticmaalo labada adeeg ee kale.
Apple Cash, waa lacagta udhaxeysa isticmaaleyaasha Apple Pay
Saddex sano ka dib imaatinka Apple Pay, shirkaddu waxay soo saartay Apple Pay Cash magaciisa ayaa is beddelay dhowaan iyo maanta waxaa si fudud loogu yaqaanaa Apple Cash, in kastoo magaca asalka ah uu horey u muujiyey muhiimada nidaamka bixinta mobilada ee adeegga cusub.
Habka ugu fudud ee lagu qeexi karo Apple Cash waa sida nidaamka lacag bixinta isku-filnaansho ama P2P. Taasi waa, hab ay isticmaalayaashu awood u yeelan karaan dir, hel ama codso lacag inta u dhexeysa isticmaaleyaasha. Labadaba waa inay lahaadaan nidaamka si loo sameeyo macaamil ganacsi midba midka kale. Xawaaladda waxaa lagu sameeyaa iMessage waxayna u baahan tahay xaqiijin.
Wax badan oo Apple Cash ah sida Apple Card ayaa kaliya laga heli karaa Maraykanka
Intaa waxaa sii dheer, haddii aad leedahay badbaadin togan, waxaa lagu kaydiyaa kaar Apple Pay gaar ah oo aad u isticmaali karto inaad ku bixiso dukaamada caadiga ah. sida inay ka mid tahay kaararkaaga kale. Waxa kale oo aad lacagta ku ridi kartaa koontadaada jeegga. Apple Cash waxay lacag ka heshaa kaarkaaga kale ee debit firfircoon ama kaarka Apple (oo aan arki doonno tan xigta). Kaararka amaahda oo aan ka aheyn Apple Card looma ogola.
Iminka, Apple Cash waa la shaqeeyaa oo keliya U.S.A. In kasta oo wararka xanta ah ee soo noqnoqda ay u muuqdaan ku saabsan ballaarinta dalal badan.
Apple Card, kaarka deynta tufaaxa
Iyadoo la adeegsanayo Apple Card, wareegga lacag-bixinta dijitaalka ah ee Apple. Ama, halkii, saddex-xagalka la xiray. Waa kaadhka amaahda ee caadiga ah oo ay dhistay shirkadda tufaaxa qaniinyada. Sidaa darteed, waxay leedahay nooc digital ah iyo mid jireed, aakhirkii wuxuu qaatay doorka hogaaminta ee laga sameeyay aluminiumka wuxuuna muujiyaa kaliya magac iyo astaanta Apple.
Nooca dhijitaalka ah waxaan ugu adeegsan karnaa sida kuwa kale oo loo adeegsado Apple Pay. Xaraashka titanium waxaad ku bixin kartaa xarun kasta oo aqbasha kaarka, yeela POS xiriir la’aan ama maya. Kani waa gaar ahaan ku habboon Mareykanka, maadaama ay wali jiraan dukaanno badan oo aan laheyn taleefan noocan oo kale ah. Waxa xiisaha leh ee ku saabsan Apple Card waa in ay soo celiso qeyb ka mid ah waxii aad wax ku iibsatey iyagoo lacag caddaan ah isku dheelitirka Apple Cash:
3% dib u soo celinta iibsiyada lagu sameeyay Apple (alaabada, barnaamijyada, iCloud, iwm.).
2% dib u soo celinta iibsiyada halka aad ku isticmaasho Apple Pay.
1% dib u soo celinta iibsiyada ay sameeyeen Apple Pay.
Maaddaama ay tahay kaarka deynta, waxaan ku bixin karnaa iibsiyadaheena iyada oo lagu isticmaalayo xaalad macquul ah kahor inta macquul ah dalka. Waxay kuxirantahay dhibcahaaga amaahda, waxaad bixin doontaa 12.99% ama 23.99% iibsiyadaha dib loo dhigay. Intaa waxaa dheer, barnaamijka Wallet laftiisa ayaa kugu dhiirigelin doona inaad sida ugu dhakhsaha badan u bixiso deyntaada si aad u yareyso culayska dulsaarka (oo ka soo horjeedda waxa bangiyada “ku dhiirrigeliyaan” inay sameeyaan).
Apple wuxuu sii daayay nooca 12.4 ee macruufka ‘iOS’ kaasoo diyaariya nidaamka loo isticmaalo Apple Card mabda ‘ahaan, waa la heli karaa oo keliya U.S.A (Bilaabisteeda ayaa xadidan xilligan) inkasta oo ay horay u qaadeen tallaabooyin lagu doonayo in ballaarintiisa caalamiga ah. Wuxuu sidoo kale la wadaagay dhowr fiidiyow oo muujinaya howlgalka kaarka si faahfaahsan.